Ukuphupha ngomona Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Mhlawumbi yonke into el mundo uyazi imvakalelo yomona: isibini sichitha ixesha elininzi nomnye umfazi okanye indoda, abazali babonakala bekhetha abantakwabo, umama unomona ngomolokazana, umhlobo osenyongweni okanye umhlobo osenyongweni ngesiquphe ngabantu abatsha chitha ixesha elininzi okanye umphathi uxabisa umsebenzi weqabane lakho ngaphezu kowakho.
Zonke ezi ziimeko eziyimizekelo apho abantu baziva benomona kubomi bemihla ngemihla. Kwingqondo yengqondo, kuthetha ukungaziva mnandi okwenzekayo xa umntu engafumani ngqwalaselo yaneleyo, ukuqondwa, ukuthanda okanye uthando kumntu oxabisayo okanye othanda kakhulu. Enye into efunekayo ekhwele kukuba umntu ekuthethwa ngaye unikezela ukungakhathalelwa, ngokwenyani okanye ngokuzithoba, komnye umntu ngoku ekugxilwe kuye. Unobangela womona, kodwa kunye neziphumo zawo, zihlala zoyika ukuphulukana.
Emaphupheni, iimvakalelo zephupha zihlala ziqiniswa, ukuze ive apha ngakumbi kwaye ngamanye amaxesha ilawulwa kancinci kunakwimeko yokuvuka. Ke, emaphupheni, zihlala zikhona iimvakalelo zekhwele, ezinokuvela ngokukhawuleza, umzekelo, kuthando olungabuyanga ngokwaneleyo. Iphupha, ewe, linokungqina ngeemvakalelo zokwenyani zephupha kwimeko yokuvuka, kodwa kukwakho nokutolikwa kwamaphupha okubona umona njengophawu lotshintsho.
1 Uphawu lwephupha «umona» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umona» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umona» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umona» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba iphupha lomona linjalo Iimvakalelo ukusuka kwimeko yokuvuka. Ukuba iphupha linomona ngokwenene kubomi bokwenyani, ke ezo mvakalelo zihlala zifumaneka emaphupheni.
Ukuba imeko ephupheni inokudluliselwa kubomi bephupha, ke uphawu lwephupha ngamanye amaxesha lufuna ukukubonisa iimvakalelo zekhwele, ongekazazi kakuhle. Apha ke kubalulekile ukuba utoliko luqwalasele ukuba ngubani owayenomona ephupheni kwaye kutheni kwaye ukuba eli khwele lalifanelekile.
Kule meko, umona njengomfanekiso wephupha mhlawumbi luphawu lokuba unokuba nomona ngokusemthethweni xa uvukile. Nangona kunjalo, kolunye utoliko, uvakalelo lusenokuthetha ukuba indlela oziphethe ngayo inokwenza abanye abantu babe nomona.
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "umona" unokuthi Ukulwa kunye nokubhengeza iimfazwe ezingenakuthintelwa. Mhlawumbi ingxabano iza kuza nabantu obanomona ngabo.
Kwakhona, ukuba uphupha ngomona, kusekho ukutolikwa okuninzi okuxhomekeke kumxholo. Ngamanye amaxesha iphupha lomona lifanekisela ubomi obukrakra okanye lubonisa uthando olungonwabanga. Ukuba umntu unomona ngomnye umntu ephupheni, kusenokwenzeka ukuba unamatyala kuye. ingxaki izixhobo. Ukuba, kwelinye icala, abanye abantu abaphuphayo banomona ngomphuphi, ke ubunzima bunokusonjululwa kwimeko yokuvuka, ukuze kubekho uphuhliso oluqinisekileyo phaya umntu olalayo.
Kwakhona, kufanelekile ukutolika iphupha ngubani onomona ngabani ephupheni. Ukuba umfazi unomona ngendoda yakhe, ke umfanekiso wephupha unokuba sisalathiso Ukungaqinisekiyiba nembangi okanye ithamsanqa elikhohlisayo. Ukuba indoda iphupha ngomfazi onomona, inokuba nefuthe kakhulu kwiintshaba nakubantu abanangqondo.
Ukuba ungumfazi omncinci onomona ngeqabane lakhe, ke eli qabane ngamanye amaxesha liziva lifana naye. Ukuhamba ukutsala abanye abantu basetyhini. Ukuba bobabini abalingani kulwalamano banomona omnye nomnye kwilizwe lamaphupha, ukutolikwa kwephupha kubonisa iimeko ezingathandekiyo kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba umntu ophuphayo uhlekisa ngomnye ngenxa yomona ngelixa elele, kufuneka abenolwazi ngovuyo lwakhe ngokunxulumene noko kwenziwa ngomnye umntu kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «umona» - ukutolikwa kwengqondo
Isiseko seemvakalelo ezininzi zekhwele Ukungaqiniseki y Uloyiko lokuphulukana. Umzekelo, abo bangathembi amaqabane abo kwaye abakholelwa ukuba baxabisekile kuthando lwabo nabo banokoyika ukuba iqabane liya kufuna omnye umntu.
Ke ngoko, ukuba uphupha ngomona, ngokuchazwa ngokufanelekileyo kwephupha, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uziva uloyiko lwelahleko kwimeko yokuvuka. Ke yintoni okanye ngubani ongafuni ukuphulukana naye? Kwaye ngaphezu kwako konke, ngubani okanye yintoni owoyikayo ukuphulukana nayo?
Xa ufumanise, uphawu lwephupha lomona lukumema ukuba ucinge ukuba ngaba uloyiko lokulahleka lufanelekile kwaye alunakukwenzakalisa ekuhambeni kwexesha. Ngaba kungenxa yokuba kukungazithembi kwakho okwenza ukuba uziphathe ngendlela engayihlukanisa iqabane lakho, umntu osebenza naye okanye umhlobo wakho ngexesha elithile?
Ngamanye amaxesha umona uvela kuyo. ukuzithemba kuphelile okanye ngokubanzi ngenxa yobunzima bokuthemba abanye abantu. Apha, ukutolikwa kwalo mfanekiso wephupha ucebisa ukuba iphupha kwimeko yokuvuka kungenzeka ukuba ukhe waphula uxanduva olukhulu lokuthembela kwixa elidlulileyo kwaye ke ngoko uziva unomona ngokulula. Kule meko, kuxhomekeke komnye umntu ukuba aphinde abuyise ukuthembana kwabo.
Uphawu lwephupha «umona» - ukutolika kokomoya
Umona ikakhulu ukhula xa umntu evakalelwa kukuba akaqwalaselwa okanye akaxabiswanga ngokwaneleyo.
Ngokunokwenzeka umfanekiso wephupha unxulumene ngengqondo yokomoya kwinto yokuba iphupha lingaphezulu kokomoya. Uxabiso ufuna iinzame zakho kwaye ke unxibelelwano olusondeleyo ngokomoya.